ARM & BOOM Vagadziri uye vanotengesa - China ARM & BOOM Factory
Bonovo Extension Arm inokodzera kuwanda kwemabasa akasiyana uye inokutendera iwe kugadzirisa mapurojekiti ayo angadai akamboda excavator yakareba-inosvika.
Ndicho chibatiso chekupedzisira chevashandisi vane basa refu rekuita asi vasingade kuburitsa mari yeyakareba-inosvika yekuchera.
Bonovo maviri Chikamu Yakareba Reach Boom uye Arm ndiyo inonyanya kufarirwa mhando yeBoom uye Arm.Nekuwedzera iyo boom uye ruoko, inogona kushandiswa munzvimbo zhinji dzakareba kusvika basa mamiriro. Chikamu zviviri chakareba kusvika ruoko & boom inosanganisira: Yakareba boom * 1 , Yakareba ruoko * 1, bhaketi * 1, bhakiti humburumbira * 1, H-Batanidza & I-Batanidza * 1 seti, mapaipi & hoses.
Bonovo Rock Arm neBoom ine simba rakasimba rekuchera rinoshandiswa zvakanyanya mukuchera, kuvaka mugwagwa, kuvaka dzimba, kuvakwa kwevhu rakaomeswa uye mamwe marudzi emapurojekiti.Ziri nyore kutyora ivhu rakaomarara zvakanyanya uye pasi simende, inoshanda zvakanyanya kupfuura iyo nyundo inopwanya inogona kuita mune yakatarwa mamiriro ekushanda.
Bonovo Telescopic Arm inonzi zvakare barrel ruoko. Chikamu chekutanga muviri wakagadzika, mamwe ese ari kufamba miviri. Yese miviri inofamba inoiswa mumuviri wakagadziriswa. Iyo sitiroko cylinder inoshandiswa kuwedzera kana kudzosa, inowanzo shandiswa pane zvekuchera matangi akadzika kana mashandiro epamusoro-soro.
Bonovo Tatu Chikamu Yakareba Reach Boom & Arm inonziwo kupaza boom & ruoko. Nematanda matatu echikamu, nzvimbo yekushanda yakakura, izvo zvinoita kuti ive inokodzera mamiriro ekuparadza. Chikamu chechitatu chakareba kusvika boom & ruoko rinosanganisira: refu boom * 1, ruoko rurefu, 1, yepakati tsvimbo, 1, bhakiti humburumbira * 1, ruoko humburumbira * 1, H-chinongedzo & l-chinongedzo *! set, mapaipi & hoses.